Ijoollee Oromoo Gabrummaan Gurguraman-Kutaa 1ffaa – OROMP4 Studio
Waa’ee Oromoota gabrummaan gurguramanii qorataa kan jiran Saandraa Roowoolt Sheel Yunivarsitii Keep Tawoon irraa VOAf akka ibsantti bara 1888 jechuun waggaa 123 dura ijoolleen Oromoo biyya maatii isaanii waliin jiraataa turan keessaa qabamanii gabrummaatti gurguraman.
Galaana Dimaa eega geessamanii booda Bidiruu sadiin fe’amanii gara gabaa Araboonni garba itti gurguranii geessamaa otuu jiranii kan naannoo sana ture humni Galaanaa kan Biriteen giddu seenee namoota 204 walaba baase. Kanneen keessaa 183 ijoollee turan. Duea gara Edenitti isaan geessan.
Ijoolleen Oromoo kun kanneen imala hamtuu keessa darbanii, beelaa fi caamaan midhaman waan ta’aniif 11 ka ta’an Eden keessatti du’an. Walakkaa kan ta’an musleemoota waan turaniif namoonni Eden jiraatan fudhatanii guddisan.
Kanneen biroon Waaqeffatoota amantii aadaa waan turaniif misiyononnii fudhatanii guddiisuuf waggaa tokko caalaa yaalaniii, haalli qilleensaa hamaa waan itti ta’eef gara Afrikaa Kibbaatti dabarsanii ergan. Sana booda maaltu ta’e? Kutaa tokkooffaa MP3 tuquun dhaggefadhaa.
Ijoollee Oromoo Gabrummaan Gurguraman-Kutaa 2ffaa
Ijoolleen Oromoo bara 1888 keessa biyya irraa qabamanii booda walaba ta’uun gara Afrikaa kibbaatti geessaman keessaa Bishoo Jaarsaa tokko.
Gama biraan iIjoollee gara dhaabbata Love dell kan Afrikaa kibbaatti geessaman keessaa durbooni oromoo lama jechuun Bishoo jaarsaa fi ka biraan tokko cichaan barnoota itti fufanii Kradik keessatti barsiisoota ta’an.
Sana booda bara 1911 Bishoo jaarsaa lammi Afrikaa kibbaa fi luba waldaa kristaanaa kan ta’an Freedrik skiipers-tti heerumtee mucaa durbaa Dimbitii jedhamtu godhatan.
Dimbitiin immoo nama ooguuma harkaa qabu lammi Afrikaa kibbaa David Alexander jedhamutti heerumtee ijoollee godhatte keessaa amma umriin isanii 74 kan ta’e Dr Nevelle Alexander Angafa.
Ijoollee oromoo dhaabata Love Dell seenuuf carrooman 64 keessaa haala jireenyaatti baruu dadhabuu irraa kan ka’e hanga bara 1904tti kan du”an 18. Kan biyyatti deebi’an immoo gara 17 ta’u.
warri hafanoo? MP3 tuquun dhaggefadhaa.